Qaramada Midoobay oo shaacisay Musuqmaasuq ka jira Bangiga Dhexe ee Soomaaliya iyo shaqsiyaadka ugu badan ee galay | warsugansomaliya.wordpress.com
Qaramada Midoobay oo shaacisay Musuqmaasuq ka jira Bangiga Dhexe ee Soomaaliya iyo shaqsiyaadka ugu badan ee galay
Warbixin ay diyaarisay Qaramada Midoobay ayaa lagu sheegay in la lunsaday lacag gaareysa $12 milyan oo la sheegay in lagala baxay Bangiga Dhexe ee Soomaaliya ee ku yaalla Muqdisho, iyadoo warbixintu ay ku eedeysay guddoomiyaha Bangiga Dhexe, Cabdisalaan Cumar Hadliye, inuu ku lug leeyahay lunsashada lacagta.
Guddoomiyaha Bangiga Dhexe ee Soomaaliya ayaa xilka qabtay bishii January ee sanadkan, waxayna warbixinta ku eedeysay inuu isagu bixiyay go’aamada lagu saaray lacagta.
Wakaaladda wararka ee Reuters oo Isniintii shalay aragtay warbixinta uu qoray guddiga dabagalka ee Qaramada Midoobay, ayaa qortay in 80 boqolkiiba lacagta laga saaray Bangiga Dhexe loo isticmaalay ujeeddooyin gaar ah.
Hay’ad u xil-saarnayd mas’uuliyadda ammaanada oo ay maamusho shirkadda lagu magacaabo PricewaterhouseCoopers ayay warbixintu sheegtay inay noqotay mid magac u yaal ah oo aan xaqiijin karin sida loo maareeyo lacagta ay la baxaan mas’uuliyiinta sare ee dowladda Soomaaliya.
“$16.9 milyan ayay hay’adda PWC u xawishay Bangiga Dhexe, $12 milyan oo ka mid ah lama garanayo halka ay ku baxday.”
Xisaabaadka Bangiga Dhexe waxay muujinayaan in nin khasnaji ka ah wasaaradda maaliyadda, oo magaciisa lagu sheegay Ahir Axmed Jimcaale uu mas’uul ka yahay la bixitaanka lacagtii ugu badneyd.
Warbixintu waxay sheegtay in ninkaas magaciisa lagula baxay lacag gaareysa $20.5 milyan sanadihii u dhaxeeyay 2010 iyo 2013, taas oo la siiyay shaqsiyaad gaar ah oo waraaqo ka sitay mas’uuliyiin ka tirsan wasaaradda maaliyadda.
Shaqsi kale oo lagu magacaabo Kornayl Cabdiqaadir Macallin Nuur ayay warbixintu sheegtay inuu la baxay $4.7 milyan muddadii u dhaxeysay 2010 iyo 2013. Waa lacagtii labaad ee ugu badneyd ee la lunsaday sida ay sheegtay warbixinta, loomana hayo sharraxaad ku saabsan sida loo isticmaalay.
Shirkadda PricewaterhouseCoopers, guddoomiyaha Bangiga Dhexe Cumar iyo howlgalka Qaramada ee Soomaaliya ilaa hadda kama aanay jawaabin codsi la rabay inay uga hadlan arrintan.
Warbixintu waxay sheegtay in muddadii u dhaxeysay September, oo aheyd markii dowladda cusub ee Xasan Sheekh ay xilka qabatay, iyo April, in afar meelood saddex meel in lacagta Bangiga Dhexe ay ka saareen shaqsiyaad gaar ah.
Hay’adda lacagta adduunka ee IMF ayaa aqoonsatay dowladda Soomaaliya bishii April, kaddib 22 sano, waxayna toddobaadkii hore siisay taageero farsamo iyo talo, oo ah tallaabadi ugu horreysay oo daynta looga cafinayo Soomaaliya.
Warbixinta Qaramada Midoobay ayaa si rasmi ah loo shaaciyaa sanad kasta bisha July
← ciidamada xisbada ee alshabaab oo toogtay laba nin.
Khilaafka ka taagan Arrinta Xassan Dahir Aweys oo ay kusoo biiren Dowladaha Turkiga,Qadar iyo Norwey. →